I-WQ / ES Series Mincing Submersible Indle Pump
1.I-module yokusika ezimele, umsebenzi omuhle wokusika, akulula ukuvimba. Inqobo nje uma ingafakwa ethekwini lokumunca, ingaqunywa kalula. Ukuhambisa amanzi angcolile amancane, amathangi we-septic, indle yasesibhedlela neminye imithombo yezindaba equkethe imicu emide futhi emincane. Izinhlayiya ezinkulu azikwazi ukuhanjiswa. Umsebenzi wokugaya ungavimbela iphampu nepayipi ukuthi livinjwe yimfucumfucu endle. Kodwa-ke, ukuze kuqinisekiswe kangcono ukuthembeka kokusebenza kwepompo, kunconywa ukufaka insimbi evimba ukungcola emvelweni ongaphandle kwaphakathi.
Ipompo elicwilikayo eline-grinder, ipompo lamanzi elicwilikayo eline-grinder, ipompo lokuhambisa ugesi eline-grinder, ipompo lokuhambisa indle elicwilayo ne-grinder, ipompo lokucwilisa elicwengekileyo, ipompo lamanzi elicwilayo elisika, ipompo lokucwilisa elicwenga nge-cutter, ipompo lokuhambisa indle elicwengekileyo, njll.